Daanyeer basaasad Caano ah nuujiyay Shabeel yar ayaa Caalamka ka yaabsaday (Bal Daawo Qosolkaan) !! - iftineducation.com
Daanyeer basaasad Caano ah nuujiyay Shabeel yar ayaa Caalamka ka yaabsaday (Bal Daawo Qosolkaan) !!
aadan21 / November 18, 2012
Daaanyeer nuujinaayo shabeel
iftineducation.com – Hefei-Zoo waa Xarun lagu xanaaneeyo Xayawaanaadka kuna taal magaalada Anhui ee Koonfur Bari dalka China waxaana sanad kasta xeradaan ka dhaco mucjisooyin kala duwan oo shacab weeynaha Caalamka aad u soo jiita.
Daanyeer 2 sano jir ah oo lagu magacaabo Chimpanzee ayaa waxa uu Basaasad Caano ah nuujinayaa Shabeel 2 Bilood jir ah oo baahan kaas oo isna lagu magacaabo Aorn.Qisadaan oo soo jiidaneeysa qof kasta oo daawado waa mid ka mid ah Mucjisooyinka Rabaaniga ah ee ka dhaca maalin kasta Dunida.
Daanyeerkaan ayaa waxaa sidoo kale la sheegay in uu maalin kasta la Ciyaaro dhoor Shabeel oo aad u yar yar balse Dhaqaatiirta ku taqsuustay Xayawaanadka waxa ay carabka ku dhufteen hadii ay Shabeelada weeynaadaan ama gaaraan ilaa hal sano in uu sidaas ku dhamaaday xiriirkii ka dhaxeeyay Daanyeerka iyo Shabeelada maxaa yeelay Shabeelka marka uu weeynaado ama caqliyeesto lama tusi karo fak fakta faraha badan ee Daanyeerka wuxuuna ka dhigi doonaa labo cad.
Halkaan ka Daawo Daanyeer Caano Nuujinaya Shabeel
Maxkamad ku Taala Mareeykanka oo 25-sanoo ku Xukuntay Soomaali Dilay Somali kale
Guurka ka hor su’aalaha ladoonayo in ay gabadha is waydiiso(Fadlan isweydii Su’aalahan)))